‘अहिले अनमोल केसीबाहेक हिरो कोही छैन’
साथीबीच छलफल भयो, निष्कर्ष निस्कियो– यसरी त हुँदैन । एक दिन उनीहरूले आफ्नो रुचीको क्षेत्रबारे छलफल गरे । सबैले आ¬–आफ्नो स्वभाव र रुचिबारे बताए । दीपेन्द्रको रूची देखियो सिनेमामा । जापानमै हुँदा पनि सिनेमाको महँगो डिभिडी लगेर हेरिरहेको कुरा साथीहरूले पनि याद गरेकै रहेछन् । साथीहरू सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा लाग्ने निर्णय गरे । दीपेन्द्र पनि लागे सिनेमा अध्ययनतिर । पढिरहेको युनिभर्सिटीमा त उनले बिषय परिवर्तन गर्न सक्दैनथे, भिसा नै त्यसैका लाथि थियो । तर उनले निजी हिसाबले सिनेमा अध्ययन गर्न थाले । भन्छन्, ‘त्यो छलफल नै हामी केही युवाको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट थियो । अन्य क्षेत्रमा रुची पत्ता लगाएका साथीले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । म पनि आफ्नो क्षेत्रमा सन्तुष्ट छु ।’
नेपाल आएपछि उनले आफ्नो गाउँका दाइ अर्जुनकुमार भेटे, जोसँग नियमित सम्पर्कमै थिए । अर्जुनको गीत त्यतिबेला चलिरहेको थियो र आलोक नेम्वाङसँग भिडियो पनि गरिरहेका थिए । सिनेमा र मिडियामा पनि परिचित थिए । उनले नै दीपेन्द्रलाई सिनेमा क्षेत्रमा हुलिदिए । दीपेन्द्रले पनि अर्जुनको केही गीतको भिडियो निर्देशन गरे । त्यसपछि सिनेमामा हाम फाले । ‘द युगदेखि युगसम्म’ सिनेमाबाट सुरु भएको उनको यात्रा ‘धर्मा’, ‘चपली हाइट’, ‘भिजिलान्ते’, ‘झोले’ हुँदै अघि बढ्यो । आउँदो शुक्रबार उनको छैठौं सिनेमा ‘पशुपतिप्रसाद’ रिलिज हुँदैछ । जसलाई नेपाली सिनेक्षेत्रमा प्रतिक्षित मानिएको छ । सामाजिक बिषयलाई सिनेमामा बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता भएका निर्देशकका रूपमा उनको छवि बनेको छ ।
दीपेन्द्र सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ सोच बोकेर प्रवेश गरे । तर उनको पहिलो जम्काभेट नै परम्परागत व्यवसायिक सोचसँग भयो । त्यतिबेला राजेश हमालमाथिको लगानीलाई सुरक्षित मानिन्थ्यो । अर्थात विकल्प पनि हुन सक्छ भन्ने सोच दुर्लभ थियो । उनी राजेश हमालको स्थानमा आसिफ शाहलगायतका कलाकार लिन चाहन्थे । तर त्यो सम्भव भएन । राजेश हमालमाथि नै लगानी गरिएको सिनेमाबाट काम सुरु गरे । तर त्यसैमा पनि उनी ‘केही नयाँ’ दिन चाहन्थे । त्यसैले आफ्नो पहिलो सिनेमा ‘द युगदेखि युगसम्म’ मा उनले हमालको परम्परागत ’लुक्स’ परिवर्तन गरिदिए । त्यसपछि त के चाहियो र ? डिस्ट्रिब्युटरदेखि हलवालासम्मको एउटै स्वर भइहाल्यो, ‘यस्तो सिनेमा त चल्दैन ।’
त्यसपछि, एक समय बलिउडमा चकचकी चलाएकी मनिषा कोइरालालाई लिएर उनले ‘धर्मा’ सिनेमा बनाए । परम्परागत सोच भएकै वृत्तसँग काम गर्नुपरे पनि उनले मनिषालाई नेपाली सिनेमामा ‘कमब्याक’ गराएको जस पाए । उनको छवि केही केही नयाँ गर्न खोज्ने निर्देशकको रूपमा बन्दै थयो । दीपेन्द्र भन्छन्, ‘चपली हाइटदेखि चाहिँ मैले अलि भनेजस्तो गर्न पाएँ । तर त्यसबेला पनि कहाँ सजिलो भयो र ? मान्छेले पचली हाइट भनेर जिस्काए । कतिले सिनेमा लगाउनै मानेनन् । डिजिटलले खिचेको पनि सिनेमा हुन्छ पनि भन्थे ।’
आउँदो शुक्रबार खगेन्द्र लामिाछाने र बर्षा शिवाकोटी स्टारर सिनेमा ‘पशुपतिप्रसाद’ लाग्दैछ । जसको चर्चा निकै अघिदेखि भइरहेको छ । दीपेन्द्रको पनि यो सिनेमाको महत्व धेरै छ । भन्छन्, ‘यसभन्दा अघिचाहिँ बजारमा चल्ला भन्ने हिसाबले सिनेमा बनाएँ । हेर्दा दर्शकले फ्रेस अनुभूत गरून् भनेर नौलो प्रयोग गरिरहेको हो । पशुपतिप्रसादमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म गर्न मन लागेको काम देखाएको छु ।’
यसमा चाहिँ उनले कथा भन्ने शैलीमै नयाँ प्रयोग गरेको दावी गरेका छन् । ‘कथा भन्ने शैली नै फरक छ । पटकथाको बुनाइ पनि त्यस्तै । कुनै राम्रो सिनेमा हेरेर फर्कदा जसलाई पनि खुशी लाग्छ । त्यो खुशी पशुपतिप्रसादले दिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ’, उनले भने ।
त्यसो त ‘पशुपतिप्रसाद’को सेटिङ र कलाकार छनोटमा गरेको मिहिनेतले पनि सिनेमालाई राम्रो बनाएको दावी गर्न उनी चुकेनन् । ‘पूर्ण रूपमा पशुपतिमा नै सेटिङ गरिएको सिनेमा यो नै पहिलो होला । अर्को कुरा, स–साना चरित्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । त्यसलाई जीवन्त बनाउन थिएटरका कलाकार राखेका छौं ।’
‘पशुपतिप्रसाद’ उनकै भनाइमा ‘पाको’ सिनेमा हो । ‘पाँच सिनेमा बनाइसकेपछि निर्देशकको हिसाबले म पनि परिपक्व भएको छु । चलचित्र पनि परिपक्व बनेको छ । सिनेमा परिपक्व बनेरमात्रै हुँदैन, चल्नु पनि पर्छ । दुवै कुरामा सिनेमा खरो उत्रन्छ भन्ने आशा छ’, उनले आत्मविश्वास व्यक्त गरे ।
उनी इमान्दारितालाई सिनेमा निर्देशनको पहिलो सर्त मान्छन् । ‘पशुपतिप्रसाद’ आफूले त्यो इमान्दारिता प्रदर्शन गरेको उनको दावी छ । ‘सिनेमा निर्माणको तरिका त जनरा र स्क्रिप्टअनुसार हुने हो । तर त्यसमा इमान्दारिता हुनुपर्छ । म पहिलेदेखि नै यसमा सचेत थिएँ । अहिले त अझै सचेत छु । किनकि अहिलेका दर्शक र मिडिया यति बुझ्ने भइसक्नुभयो कि सानो गल्ती पनि पत्ता लाग्छ । जसमा माफी हुँदैन ।’
सिनेमामा निर्देशकको स्वभाव झल्किनु पर्छ । तर यसअघिका चलचित्रमा दीपेन्द्रले महसुस गरे कि आफ्नो स्वाभाव देखाउनै सकिएन । ‘पशुपतिप्रसाद’मा उनले आफ्नो स्वभाव देखाउन पाएका छन् ।
उनको भनाइअनुसार ‘पशुपतिप्रसाद’मा हँसाउने, रुवाउने र मायापिरतीका कुरा त छन् नै । त्यसमा नैतिकता र आदर्शलाई पनि अन्तरघुलन गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘रुढीवादले पैदा गरेको डर, नैतिकताको संकट र सम्बन्धलाई मैले यसमा बिम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु । सिनेमामा ट्रेलरमा नदेखिएका धेरै कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि दर्शकमा प्रशस्त प्रभाव पार्नुहुनेछ । धेरै स्वाभाव र चरित्रलाई सम्बोधन गर्ने पात्र सिनेमामा पाइनेछ । त्यसैले केही न केही महत्वपूर्ण सन्देश पशुपतिप्रसाद हेरेर लिन सक्छन् दर्शकले ।’
थिएटर कलाकारको चरित्रलाई न्याय गर्न सक्ने क्षमताबाट उनी प्रभावित देखिन्छन् । त्यसलाई ‘पशुपतिप्रसाद’मा उपयोग पनि गरेका छन् । त्यसैले ‘पशुपतिप्रसाद’मा आफूले हिरो होइन, कलाकार खोजेको उनले बताए ।
पुरानो पुस्ता - खारिएको छ, तर अपडेट छैन